आईतबार सूर्य देवको आराधना गर्नुस, हुनेछ यस्तो लाभ – Khabar PatrikaNp
आईतबार सूर्य देवको आराधना गर्नुस, हुनेछ यस्तो लाभ
November 22, 2020 127
सूर्य देवको आराधना गर्दा मनुष्य बल , बुद्धि , तेज , मान -सम्मान , धन -सम्पति और स्वास्थ्यले परिपूर्ण भैइन्छ । यसको साथ-साथ सूर्य देव को नित्य आराधना गर्दा मानव जीवनमा नव शक्तिको संचार हुन थाल्छ। सूर्य देवको पूजाले मानव जीवनमा हुने प्रभावको सूर्य देवको आराधनाले शरीर रोगमुक्त हुन्छ।
रोग जस्तो पनि होस् सूर्य देवको विधिवत आराधनाले रोग बाट मुक्ति मिल्छ। मानसिक व्याधियों (चिंता , तनाव , अवसाद , नकारात्मक सोच ) बाट मुक्ति मिल्छ। सूर्य देवको पूजाले जीवनमा सकारात्मक उर्जाको संचार हुन्छ। सूर्य देवको पूजाले मन बाट अहंकार, हीन भावना, ईर्ष्याको भाव दूर हुन्छ ।
जो व्यक्ति सम्पूर्ण जीवन सूर्य देव को आराधना गर्दछ , जल अर्पित गर्दछन् त्यस्तो मनुस्यको मुखमामा सैदव तेज रहन्छ। यस्तो व्यक्तिमा अरुलाइ आफु तिर आकर्षित गर्ने क्षमता विकसित हुन थाल्छ। सूर्य देवको नित्य आराधना गर्ने व्यक्तिको स्वभाव निडर र शरीर बाट बलवान हुन्छ।
Prevहिन्दू धर्ममा सूर्यलाइ देवताको रूपमा किन पूजिन्छ ? जान्नुहोस
Nextघरको यी स्थानहरूमा स्वास्तिक बनाउनुहोस, हुनेछ धेरै फाइदा….
बीमा भुक्तानीका लागि नगेटिभ रिपोर्टलाई पोजेटिभ बनाउने अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ
अध्यक्ष महत्तकी आमा बाढीमा बे’प’त्ता